Foko sy Fiaviana · Aogositra, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Foko sy Fiaviana · Aogositra, 2018
Tantara mikasika ny Foko sy Fiaviana tamin'ny Aogositra, 2018
Nepal : Hetsipanoherana bobaka be
Nepal 29 Aogositra 2018
Tsy manam-pitsaharana mihitsy ilay firenena ao Himalaya, raha ny fijery azy. Lavabe ny lisitr'ireo fijaliana iainan'i Nepal isanandro. Taorian'ilay fifamaliana momba ny toerana masina ao Pashupatinath, ny ezaka ho fandraisana miaramila ho ao amin'ny tafika nepaley sy ny tsy fisian'ny fahalinan'ireo mpitondra mba handrafitra lalam-panorenana vaovao, ankehitriny tratry ny onjanà hetsipanoherana mahery setra ilay firenena. Tsy lazaina intsony ny fahatapahan'ny herinaratra maharitra 16 ora isanandro.
Amerika Latina 16 Aogositra 2018
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 14 Aogositra 2018
Ouzbékistan: Manohana an'i Umida Akhmedova ireo bilaogera
Ozbekistan 03 Aogositra 2018
Ny Global Voices dia efa namoaka lahatsoratra momba ilay mpaka sary Ozbeka Umida Akhmedova izay voampanga ho "nanompa sy ny nanaratsy ny vahoaka sy ny fomba amam-panao Ozbeka." Niteraka fahatezerana teo amin'ny mpanao gazety vahiny, mpaka sary sy ny mpisera miteny Rosiana ity fiampangana ity.
Madagasikara 02 Aogositra 2018
Azia Afovoany sy Kaokazy 01 Aogositra 2018
Taorian'ny fandroahana ireo fianakaviana IDP tao Abkhazia sy Ossetia Atsimo, namonjy ireo mpanohitra izay mangataka ny fitsaharan'ity famindrana toerana matetika atao an-tery ity no sady mangataka ny trano sahaza ho azy ireo blaogera ao Tbilisi, Zeorzia.